N'oge Ọgwụgwọ - Shijiazhuang Yiling Hospital
Email / Computers. E nwere internet njikọ na bụla ọgwụ ụlọ. I nwere ike mee ka gị na kọmputa ebe a.
TV / Air-conditioner. TV, Air-conditioner bụ ngwá ụlọ ke ọ bụla ndidi ụlọ.
Ezinụlọ ma ọ bụ enyi Services. Anyị na-enye onye ọzọ bed maka ezinụlọ ma ọ bụ enyi nke ndị ọrịa. Ọ bụrụ na ị na-ebu ihe karịrị otu enyi, anyị na-enyere akwụkwọ hotel ụlọ gị.
Hotels ma ọ bụ Ahịa ma ọ bụ ogige. E nwere ọtụtụ nnukwu Ahịa na hotels nso. A nnukwu mmiri ogige bụ n'akụkụ ụlọ ọgwụ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ pụọ ma ọ bụ ịzụ ahịa, anyị nsụgharị ga-ndu gị.
Banking Services. ATMs dị gburugburu Hospital. Chọta igwe ndọrọ ego ọnọdụ.